Flatbike, Inc. - shopgiejo.com ဖြင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောစွန့်စားမှု
Flatbike, Inc. သည် မြောက်အမေရိကနှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် အရွယ်အစားပြည့် ခေါက်စက်ဘီးများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေပြီး အခြားဖောက်သည်များ၏ ပုံမှန်ဆိုင်ကယ်များကို အပြားလိုက်ခေါက်နိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ရောင်းချပေးပါသည်။ ဒီလိုထူးခြားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဘယ်လိုစတင်တာလဲ။ မျှော်လင့်ထားသလိုမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်...
Bob Forgrave သည် အခြားသော အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော အပြေးသမားနှင့်တူသည်—ယနေ့ခေတ် အရှိန်ထက် cardio နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ပိုလုပ်နေရသော်လည်း အမှန်တကယ်ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်ခန်းမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် “အပြေးသမား၏ မြင့်မားခြင်း” ကို တန်ဖိုးထားဆဲဖြစ်သည်။
နောက်တော့ ဒူးတွေ ကျွတ်သွားတယ်။
တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက် ဆက်တိုက် ပြေးနေသည့် အလေ့အထသည် လူသွားလမ်းပေါ်ရှိ အားလုံးက သူ့ကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုင်ပြီးရင် လမ်းလျှောက်တာတောင် ခက်တယ်။ ကဲ ဘာလဲ?
အင်း… စက်ဘီးစီးတာက သိသာထင်ရှားတဲ့ အကူးအပြောင်းတစ်ခုပါ။ သင်သည် cardio နှင့် ခွန်အားလေ့ကျင့်ခြင်း၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို ရရှိနေသေးသော်လည်း ဒူးပေါင်မခတ်ဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးရင် ပြေးနေတဲ့ဖိနပ်ကို ထောင့်တစ်နေရာမှာ ပစ်ချပြီး စက်ဘီးကိုတင်တာ ကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။ . . တစ်နေရာရာမှာ
“ကားဂိုဒေါင်နားမှာ ငါ့မှာ အခန်းမရှိဘူး” လို့ Bob က ဆိုပါတယ်။ “သေတ္တာတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါကြောင့် မျှော်လင့်ထားတဲ့ ရလဒ်တွေနဲ့အတူ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ကားဘေးမှာ စက်ဘီးကို ထားခဲ့တယ်…”
“သူမက သူ့ကားကို ဝင်သုံးဖို့ ပိုလိုတယ်၊ စက်ဘီးကလည်း ရွှေ့ဖို့ လိုတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း၊ အဲဒီအကျပ်အတည်းကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ''တည်နေရာက ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ စက်ဘီးက ပုံသဏ္ဍာန် မှားနေတယ်။ ပြားနေရင်တော့ ဒီပြဿနာရှိမှာ မဟုတ်ဘူး'' ဟု ပြောသည်။
“အင်း… ဘယ်သူမှ မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် စောင့်ကြည့်ပါ…”
caption: ဘယ်နေရာမဆို စက်ဘီးစီးဖို့ နေရာကောင်းတစ်ခုပါ။
နောက်နှစ်တွင် Bob သည် ခေါက်ခြေနင်းများကို မဆုတ်မနစ် စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး လက်ကိုင်ဘားများကို လုံခြုံစွာ ထိန်းထားနိုင်သည့် အကြမ်းခံသော စက်ဘီးပင်စည်ကို တီထွင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း လက်ကိုင်ဘားများကို ၉၀ ဒီဂရီ လှည့်ကာ စက်ဘီးကို ပြားသွားစေရန် အမြန်ခေါက်ခဲ့သည်။
“ကြည့်ရတာထက် ပိုခက်ပါတယ်” လို့ Bob က ဆိုပါတယ်။ "လူတွေက ဒါကို အောင်မြင်ပြီး အနည်းဆုံး 1922 ခုနှစ်ကတည်းက မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပုံပေါ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပေါင် 60 အလေးချိန်ရှိတဲ့ လက်ကိုင်ဘားတစ်ခုစီကို အလှည့်ကျကြဲချပြီး ငါ့ကိုယ်ပိုင် မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကို အပျက်အစီးစမ်းသပ်မှုမှာ ရခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်—အကြိမ်ရေ 52,000 ၏ မြင့်မားသော စံနှုန်းကို ဆန့်ကျင်သည်။ ပျက်ကွက်!
"ဒီအချိန်မှာ ငါက ပင်စည်ကို မှန်အောင်လုပ်ဖို့ ခေါက်စက်ဘီးတစ်ခုလုံးကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်မယ်လို့ ငါထင်ခဲ့တာ။ ပြီးတော့ အဲဒါက ငါလုပ်နေတာ။ ငါက 6'5" ဆိုတော့ ခေါက်နိုင်တဲ့ "လူရွှင်တော်စက်ဘီး" သေးသေးလေးဟာ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ တစ်ဝက်လောက်ခေါက်နိုင်တဲ့ အကြမ်းခံပြီး အရွယ်အစားပြည့် စက်ဘီးတစ်စီးလိုတယ်။"
"နောက်ဆုံးတော့၊ ကျွန်တော့်မှာ SolidWorks မှာ ခေါက်စက်ဘီးဒီဇိုင်းအများစုကို ရခဲ့ပြီး၊ ပြိုင်ဘက်တွေအတွက် ဝဘ်ကို ရံဖန်ရံခါ စစ်ဆေးကြည့်တယ်၊ ပြိုင်ဖက်တွေအတွက် ဝဘ်ကို ရံဖန်ရံခါ စစ်ဆေးကြည့်တော့၊ တခြားတစ်ယောက်ယောက်က တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ အရွယ်အစားပြည့်ခေါက်ကို ရောင်းနေတာ၊ စက်ဘီး!"
“နောက်ထပ် အခိုက်အတန့်ကတော့ ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် တကယ်မိုက်မဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတစ်ခုကို ချတဲ့အခါ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ ဆိုးရွားတဲ့အချက်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ထိုင်ဝမ်မှ ခေါက်ချိုး CHANGE စက်ဘီးနှစ်စီးကို ကျွန်တော် မှာယူခဲ့ပါတယ်။”
“ကျွန်မမိန်းမက သူပိုင်ဆိုင်ဖူးသမျှ အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလို့ ထင်ခဲ့တယ်၊ တစ်ဝက်လောက်ခေါက်ပြီး ကားစင်မပါဘဲ အိမ်စည်ထဲ သယ်မသွားခင်မှာတောင် သူ့ဆိုင်ကယ်က အကောင်းဆုံးပါပဲ။ 'မင်း ကိုယ့်စက်ဘီးကို ဘာလို့ ဖန်တီးနေတာလဲ ငါ့ကို သတိပေးပါဦး။' သူမမေးတယ်။ ငါဝန်ခံရမှာက၊ ငါ့ရဲ့ CHANGE စက်ဘီးဟာ ​​စွယ်စုံရရှိပြီး အကြမ်းခံပြီး ခြေလှမ်းတွေကို အတက်အဆင်းလုပ်ထားပြီး ဖျော်ဖြေရေးတန်ဖိုးနဲ့ ကြိုးဆွဲချချိန်အတွက် အရှိန်အပြည့်နဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ထိမှန်ပါတယ်။”
"ကျွန်တော်က စက်ဘီးဒီဇိုင်းအသစ်ကို ထုတ်လုပ်ရေးလမ်းကြောင်းကို တကယ်ရောက်ချင်ခဲ့တာပါ၊ အဲဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်မှ အရောင်းစတင်လိုင်းဖြစ်လာဖို့ပဲလား။ ထိုင်ဝမ်ရှိ Changebike သည် ကျွန်ုပ်၏ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ပေ။ သူတို့က တကယ်ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပေးသွင်းသူတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အဲဒါကို မသိသေးပါဘူး!"
“တိုတောင်းတဲ့ ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာ အဲဒါက အတိအကျ ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေရောင်ကာခန်းမှ အချိန်တိုအတွင်း အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်—ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည် ထိုနေရာမှထွက်ခွာရန် လိုအပ်သည့်စက်ဘီးအားလုံးကို ပြောခဲ့သည်—မြောက်အမေရိကတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ခေါက်ချိုးပြောင်းလဲခြင်းစက်ဘီးများကို ဖြန့်ဝေရန်အတွက် Flatbike အတွက် လက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။”
တိုရွန်တိုမြို့ရှိ စက်ဘီးပြပွဲတစ်ခုတွင်၊ အရာများသည် ပို၍ပင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာသည်။ ခေါက်ခြေနင်းများထက် ပိုကောင်းသည့် CHANGE စက်ဘီးများ၊ pop-off စက်ဘီးနင်းများနှင့် ဩစတေးလျနိုင်ငံမှ ကျွန်ုပ်ရခဲ့သော ခေါက်ရိုးတံကို ပြသနေပါသည်။ . . ဘာမှမရှိတာထက်စာရင်ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ထပ် ပြခန်းဖွင့်သူ တစ်ယောက်က တစ်စုံတစ်ခုကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီ လှမ်းလာပြီး 'ငါ့ခေါက်ရိုးက မင်းထက် ပိုကောင်းတယ်။ အဲဒါကို ဖျက်ဆီးပြီး စမ်းသပ်တယ်။"
“ဒါဟာ လွယ်ကူတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။ Flatbike သည် စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် Canada မှ THINstem ကို နေရာမှန်တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်စက်ဘီးအတွက်မဆို THINstem နှင့် pop-off pedals ၏ပေါင်းစပ်ပက်ကေ့ချ်ကိုပင် ဖန်တီးခဲ့ပြီး၊ သင်၏စက်ဘီးကိရိယာကို ပြားစေပါ။.
ဤအချက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုက်ဖက်ညီသော၊ လဲလှယ်နိုင်သော မိသားစုတွင် မတူညီသော pop-off pedals သုံးခုကို ရောင်းချခဲ့ပြီး US နှင့် Canada နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် CHANGE စက်ဘီးများကို အွန်လိုင်းတွင် ရောင်းချနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Changebike ၏ full-size ခေါက်စက်ဘီးလိုင်းတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အရှိန်ဖြင့် ကြီးထွားလာစေရန် ကူညီပေးရန်အတွက် ခိုင်မာသောအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများနှင့် ပို့ဆောင်ရေးသဘောတူညီချက်များ ရှိသည်…”
“…ပြီးတော့ COVID က ရိုက်တယ်။”
COVID မှန်ထဲမှာ အကြာကြီးကြည့်တယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါများသည် ငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့သည် အရာအားလုံးကို ပိုမိုတုန်လှုပ်စေကာ အရာအားလုံးကို ဟန်ချက်မညီဘဲ ခေါက်လိုက်ကာ သင်ယုံကြည်ထားသည့်အရာများစွာကို ချိုးဖျက်၍မရနိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်၊ ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအား။
COVID ၏ အထွတ်အထိပ်ကာလတွင် စက်ဘီးကို စိတ်ဝင်စားမှု သုံးဆတိုးလာသည်။ အဆိုပါစက်ဘီးများအတွက် အစိတ်အပိုင်းအများစုသည် အနည်းဆုံးနိုင်ငံလေးနိုင်ငံရှိ စက်ရုံများကို ပိတ်ပစ်ခဲ့သည့် Shimano မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ပေးပို့ချိန်သည် 14 လအထိ ကြာမြင့်သည်—ဝယ်လိုအားကြီးမားသောစျေးကွက်တွင်ပင် အလားအလာရှိသော လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လည်ပတ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။ ပို့ဆောင်ခက သုံးဆတိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်က ခန့်မှန်းခြေနီးပါးပါပဲ။
အချိန်အတော်ကြာ စောင့်မျှော်နေသော စက်ဘီးများ အမှာစာများ ဝင်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် ၎င်းတို့သည် ချက်ချင်း ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အနိမ့်ဆုံးအချိန်တွင် Flatbike ၏စုစုပေါင်းစာရင်းသည် စက်ဘီး 1.5 စီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် hot market ၌ပင်စက်ဘီးလုံးဝရောင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အမှန်တကယ်တွင် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုသာ ရှိပါသည်- ခေါက်လိုက် နှင့် ဖြတ်လိုက်ပါ... သို့မဟုတ် နောက်ထပ် တိုးလာပါ ။
ရွှေ့ရန်စာရင်းအနည်းငယ်သာရှိသဖြင့် Flatbike သည် တံခါးသုံးပေါက်ကို အရွယ်အစား နှစ်ဆရှိသော နေရာတစ်ခုသို့ ရွှေ့လိုက်ပြီး အနာဂတ်တွင် အချိန်အကြာကြီး အဆများစွာ ပိုကြီးသော စက်ဘီးများကို အချိန်ဇယားဆွဲကာ စတင်ခဲ့သည်။ “ပြီးတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ ရရှိနေတဲ့ ခေါ်ဆိုမှုတွေကို တကယ်ပဲ နားထောင်နေပါတယ်” ဟု Bob က ပြောကြားခဲ့သည်။ “လူတွေက 'Flatbike လား? စက်ဘီး တိုက်ခန်းတွေ ကူပေးပါလား''
"ဖြစ်နိုင်စရာ။ စက်ဘီး တိုက်ခန်းတွေမှာ ပြဿနာရှိလား။ ဘယ်စက်ဘီးလဲ”
"အဆီကျတဲ့စက်ဘီး" ၎င်းသည် အနည်းဆုံး4လက်မအကျယ် တာယာပါသော စက်ဘီးဖြစ်ပြီး Flatbike ရောင်းချသည့် ပြောင်းလဲမှုစက်ဘီးများ (၎င်းတွင် စာရင်းရှိသည့်အခါ) အတိအကျ ဖော်ပြထားပါသည်။
“ဒါကြောင့် လူတွေက အဆီကျတဲ့ စက်ဘီးဆိုင်ခန်းတွေအကြောင်း မေးဖို့ Flatbike ကိုလာကြတယ်။ ၎င်းသည် Google Gods ၏ ရယ်မောဖွယ် ဟာသတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် COVID ၏ အပူဒဏ်တွင် စီးပွားရေးကို ထိန်းထားရန် လိုအပ်သော ပြဿနာတစ်ခုသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သနည်း။
"နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Tannus Tires နှင့် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး သင့်တာယာနှင့်ပြွန်ကြားရှိ သံချပ်ကာများကို ရောင်းချရန်၊ ရေပန်းစားနေသော အဆိပ်ခတ်ထားသော "အချွဲများ" သို့မဟုတ် "goo" ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ အဆိုးဆုံးဆိတ်ခေါင်းဆူးများကိုပင် အလွယ်တကူရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခု အစိတ်အပိုင်းတွေ မရတဲ့အခါ အဲဒီဖြေရှင်းချက်က ကျွန်တော်တို့ကို ထိန်းထားပေးပါတယ်။”
“နောက်ဆုံးတော့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရနိုင်ပေမယ့် ပြီးသွားတဲ့ စက်ဘီးတော့ မရှိပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေါက်ချိုးပြောင်းလဲခြင်းဘောင်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းပေါ်စက်ဘီးမော်ဒယ်ကို ဖန်တီးပြီး ရောင်းချခဲ့သည်။ ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်တို့မှာ အမြဲတမ်း စက်ဘီးနင်းတဲ့ ခြေနင်းတွေ၊ ပါးချွန်းတွေ၊ . စက်ဘီးနင်းတဲ့ စက်ရုံတွေ ပိတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ တောင်တက်စက်ဘီးနင်းတဲ့ စက်ဘီးနင်းတဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေ ချက်ချင်း ခန်းခြောက်သွားတဲ့အထိပါပဲ။”
“အဲဒါက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မေးစရာ ဖြစ်လာတယ်။ Pop-off တောင်တက်စက်ဘီးနင်းသည့်နင်းများကို e-bike သုံးစွဲသူများက ကြီးကြီးမားမားအသုံးပြုကြသည်။ အင်ဂျင်နီယာတွင် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် မှားယွင်းစွာစတင်ခဲ့သော၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပရိသတ်နှစ်ဦးစလုံးထံရောက်ရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် pop-off ခြေနင်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ ထုတ်လုပ်ရန် ဆန္ဒရှိပါသလား။
“ဟုတ်တယ်။ ငါတို့ အခု ပိုစမတ်ကျလာပြီ။" စျေးကွက်ထဲမှာ နှစ်တွေကြာလာမယ်။
ယနေ့ Flatbike- ခရီးဆောင်စွန့်စားမှု။
"COVID လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ Flatbike ကဘယ်သူလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပါ။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ကို မှန်ထဲမှာကြည့်စေပြီး အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းက အချိန်နဲ့အမျှ ထပ်ခါထပ်ခါ မေးရမယ့် အဓိကမေးခွန်းတွေကို မေးစေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ ဘယ်လိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတာလဲ။ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြေရှင်းချက်တွေကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မလဲ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့အဆက်မပြတ်ပြင်ဆင်နိုင်မည်နည်း။
“နောက်ဆုံးတော့၊ အဲဒါက စက်ဘီး ဒါမှမဟုတ် စက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူမှ ကျွမ်းကျင်သူအထိ စက်ဘီးစီးခရီးတွင် ရောက်နေသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူရန် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း မည်သည့်ဆိုင်ကယ်ကိုမဆို အပြားလိုက်လုပ်၍ ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။f၏အကွာအဝေးuတစ်ဝက်လောက်ခေါက်တဲ့ ll-size စက်ဘီး ကားစည် ၊ ထရပ်ကား ၊ လှေ ၊ ဓာတ်လှေကား ၊ တိုက်ခန်း စသည်ဖြင့် တပ်ဆင်ရန် "
"ရလဒ်အနေနဲ့၊ ခရီးဝေးကုန်တင်ကားသမားတွေဟာ လမ်းပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာကို လွယ်ကူအောင်၊ ပုဂ္ဂလိက လေယာဉ်မှူးတွေနဲ့ RVers တွေအတွက် အဝေးတစ်နေရာမှာ သွားလာဖို့၊ ကားကို အဓိကထားတဲ့ နေရာတွေက ဆင်ခြေဖုံးနေသူတွေအတွက် ကားစင်မပါဘဲ ဘေးကင်းစွာ စက်ဘီးစီးဖို့၊ မြို့ပြနေ တိုက်ခန်းနေသူများအတွက် ကားမပါဘဲ သွားလာရန်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောစွန့်စားမှု- အပြင်ထွက်ပြီး ဘဝကို ပိုအသက်ရှင်ပါ။"
“ကျရှုံးမှာကို ကြောက်တာက အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစစချင်းတွင် သင့်တွင်ထုတ်ကုန်မရှိ၊ သင့်အကြောင်းကိုမည်သူမျှမသိ၊ ဂရုမစိုက်ဘဲ ငွေဝင်လာခြင်းလည်းမရှိပေ။ သင်ကျရှုံးမှုတစ်ခုအနေနှင့် စတင်လိုက်ပါ။ အဲဒါကို ကျော်ဖြတ်ပြီး မနေ့ကထက် ပိုကောင်းပြီး ပိုစမတ်ကျဖို့ အာရုံစိုက်လိုက်ပါ။ အောင်မြင်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို အာရုံစိုက်ပါ။”
“အောင်မြင်မှုရရှိခြင်းက သင့်ကို ပိုကောင်းစေပေမယ့် တိုးတက်မှုကို ပိုခံနိုင်ရည်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကောင်းနေပြီဆိုလျှင် အဘယ့်ကြောင့် အရာတစ်ခုကို ပြောင်းရမည်နည်း။ တကယ်တော့ အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ ပိုကြီးလာတာနဲ့အမျှ၊ 'လှေကိုမလှုပ်ဘဲ' မှာ အဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုဟာ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်တွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အရှိန်အဟုန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ သေချာသလောက်သေချာစေမယ့် inertial dampener တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
“ဒါကြောင့် Flatbike မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မကြာခဏ အသုံးများတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ 'ငါတို့ စမတ်ကျရင် ငါတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ' တဲ့။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ပြီးမြောက်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် အတ္တနှင့် မာနအားလုံးကို ဖြတ်တောက်ပြီး ထူးထူးခြားခြားကြီးမြတ်သောအရာသည် မူလက သာမာန်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ လုံလောက်နိုင်သည်ကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ နည်းပညာများတိုးတက်လာခြင်း၊ စျေးကွက်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များသည် ကုမ္ပဏီအတွင်း အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ အခွင့်အလမ်းသစ်များ အဆက်မပြတ်ပေါ်လာပါသည်။ မင်းက အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို တကယ့် အားသာချက်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒါတွေက လျှောကျသွားတယ်။”
“ဒီကုမ္ပဏီက ကျွန်တော့်စက်ဘီးကို ကားဂိုဒေါင်နားမှာ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ နံရံနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်အောင် ရိုးရှင်းတဲ့ ပြဿနာလေးတစ်ခုနဲ့ စတင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့ကားဘေးမှာ သိမ်းထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ကယ်ကို လိုချင်တယ်။ (ဟုတ်ပါတယ်၊ မိုင်းကို ရွှေ့ဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။) ဒါပေမယ့် စက်ဘီးကို ပိုအဆင်ပြေစေပြီး ဖောက်သည်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ အဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုက အခု Flatbike ဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံကနေ မာရှယ်ကျွန်းစုတွေအထိ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းနဲ့ အရွယ်အစားပြည့် ခေါက်စက်ဘီးတွေကို ရောင်းချဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။”
“ယနေ့စက်ဘီးသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိပြီး ၁၈၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ အံ့ဖွယ်နည်းများဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အောင်မြင်စွာ လိုက်လျောညီထွေစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မေးခွန်းများကို ဆက်မေးနေပါက ပို၍ပင် အဆင်ပြေမည့် အလားအလာများစွာရှိသည်။ 'ပြဿနာကဘာလဲ?' 'ငါတို့ ဉာဏ်ကောင်းရင် ငါတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။' ပြီးတော့ ဒီကားရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာ Flatbike ဖြစ်လိမ့်မယ်။”
Flatbike Inc ဖြင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စွန့်စားခန်း။